Dadka ladan ee Yurub & Maraykanka oo bilaabay inay si qarsoodi ah u cunaan hilibka DAANYEERKA! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dadka ladan ee Yurub & Maraykanka oo bilaabay inay si qarsoodi ah...
Dadka ladan ee Yurub & Maraykanka oo bilaabay inay si qarsoodi ah u cunaan hilibka DAANYEERKA!
(London) 12 Juun 2019 – Hilibka daanyeerka chimpanzee-ga ah oo si sharci darro ah lagu soo geliyay dalka Britain ayaa la sheegay in laga loogey waliimada aroos ay dhigteen dad hodon ah oo Ingiriis ah, sida uu qoray warqaadka maalinlaha ah ee The Telegraph.
The Telegraph ayaa qoray in hilibka chimpanzee-ga qaab tahriibis ah loosoo geliyay UK iyadoo laga keenay dalalka Galbeedka Afrika, iyadoo aroosyo badan laga qalay hilib daanyeerkaas oo haatan la bilaabay in la xiiseeyo.
Ben Garrod, oo ah aqoonyahan yaqaanna tadawurka, bayologiga iyo noolaha soo jireenka ah kana tirsan East Anglia University, ayaa Telegraph u sheegay in ciidamada kastamada UK ay todobaadyo kahor uun qabteen hilib badan oo daanyeer oo Yurub haatan looga yaqaano ”hilib duureed”, hilibkaas ayaa la doonayay in loo duuliyo Maraykanka.
Wuxuu Garrod sheegay in marka laga soo tago inuu xayawaankani dabar go’o ay misna isaga walaacinayso silaca xayawaankan loo qalo, weliba iyadoo la adeegsanayo habab aan amaan ahayn oo keeni kara halisyo caafimaad, waxaa kaloo jira dhib ka iman kara cunista hilibka daanyeerka isu dhowaanshaha dadka iyo daanyeerka ee dhanka hidda sidka dartii.
Hilibka daanyeerka ee qarsoodiga lagu keenayo Galbeedka ayaa haatan ah ganacsi bullaalaya, iyadoo uu Telegraph qorayo in 2010, 270 tan oo hilib chimpanzee lagu qabtay garoonka Paris ee Charles de Gaulle Airport, halka 2011, ay ciidamada amaanka UK qabteen xaddi fara badan oo ah hilib chimpanzee mar ay weerar ku qaadeen guri ku yaalla galbeedka England.
Previous articleCudur halis ah oo ka dillaacay dal ay Soomaalidu ku badan tahay (Geeri dhacday)
Next articleDHEGEYSO: Nin rafcaan ka qaatay xukun argagixiso oo go’aan lama filaan ah laga gaarey!